Sida loo daabaco faylasha AutoCAD on internetka - Geofumadas
Mid ka mid ah su'aalaha badanaa la isweydiiyo ayaa ah "Sidee ayaan u isticmaali karaa awoodaha AutoCAD ee loo yaqaan" dadweynaha si websaydh "oo leh mashruuca Freewheel". Mashruucan ayaa ah aalad laga keenay sheybaarka tijaabada AutoDesk, taas oo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay isdiiwaangeliyaan, keydiyaan howlaha joogtada ah iyo la wadaagaan xogta.
Tani waxaa daabacday Lynn Allen oo ka mid ah shaybaarada AutoDesk oo tani waa tarjumaadda:
1. Waxa ugu horreeya ee aan sameeyay waxay sameysmeen sawir muuqaal ah. Waxaan ugu yeeraa daabacaadda_to_web_test.dwg. Waan ogahay, ma ahan wax asal ah oo aan sheegno. Waxay u egtahay sidan oo kale:
2 Isticmaalka awoodda daabacaadda ee AutoCAD, ee ku yaala faylka faylka.
Tani ma aha amarka daabacaadda ee aan mar walba isticmaalayo si aan u abuuro faylasha DWF. Si loo daabaco jiilka ayaa leh interface iyada oo la adeegsanayo wadahadalada geedi socodka dhammaystiran, waxaan doortay faylasha, goobta shaqada iyo / ama qaababka, qorshaha midabka iwm. Waa mid aad u fudud
3. Daabacaadda shabakada waa ka duwan tahay ka dib marka la soo diro fursadaha lagu abuurayo faylasha guryaha, sababtoo ah waxay sidoo kale abuureysaa bogga html oo leh doorbidista feylka dwf. Kadib markii aan dhameystirnay talaabooyinka, waxaan sameeyay faylasha faylka aan doortay:
4. Faylka IM1.htm waa furaha. Waxaan soo saaray mawduucyada kala duwan ama faylasha dwg badan, inkastoo ikhtiyaarka hal xaraf ah oo loo daabacan karo sidoo kale. Ugu dambeyntii lambarku sidan ayuu u egyahay:
<! - Ka badbaadi url = (0014) oo ku saabsan: internet ->
<param name = »Src» qiimaha = »IM1.dwf»>
Waxaad ka arki kartaa tag in qeexayaa browser baryi file a isticmaalaya awoodaha of Project Freewheel ah, waxaa lagu muujiyay aqoonsi ah oo muujinaysa in aan la isticmaalayo sofwtare kasta oo kale oo soo bandhiga sameeyaa iyadoo la isticmaalayo awoodaha ay bixiyaan codsigan of AutoDesk.
5. Kooxda mashruuca Freewheel waxay u baahan tahay in la hawlgalo si ay u soo rogto faylkaaga goobta laga helo webka. Sidaas awgeed goobtan waxay ubaahan tahay in lagu sheego html. Tusaale ahaan, waxaan isticmaalaa http://labs.blogs.com/files/ADR2FW sida goob, sidaa darteed waxaan ku dari doonaa tan geedi socodkayga. Ujeeddooyinkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad hesho meel ku taal meesha, halkaas oo aad ku kaydin doonto xogtaada.
6. Waxaan adeegsan jiray habka Berkeley ee qalabka korontada kuwaas oo ay ku jiraan nambar loo yaqaan sed.exe. Isticmaalidda haraadka oo leh xeer u eg tan:
s / <param name = »Src» qiimaha = »/ src =» http://freewheel.labs.autodesk.com/dwf.aspx?path=http://labs.blogs.com/ADR2FW//
Tani waxay aniga ii ogolaaneysaa inaan u badalo IM.htm sida doorasho toos ah. Haddii ay hayso wax ka badan hal html, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo qoraalka faylka kasta.
7. Waxaan ku dhejiyey qoraalka IM1.htm, natiijada waxay u egtahay tan:
<iframe scrolling = »no» width = »100%» dherer = »100%»
Marka faylasha la farsameeyo, waxaad ku dhejin kartaa qaabka aad ku dooran karto meesha aad dooratay ee 5. Waxaan u soo gudbiyay natiijada acwebpublish.htm.
Sidaa darteed wax yar oo ka mid ah qoraalka waxqabadka, kaas oo aad samayn karto gacanta, waxaad awood u yeelan kartaa automated geedi socodka, waxaad daabici kartaa faylashaada shabakada iyo kuwa kale arki karaan iyaga oo aan rakibin nooc kasta oo software ah. Sidaa darteed ka caawinta dadka kale inay wadaagaan waa wax lagu bedeli karo shaybaarka. Dhowr sano ka dib, AutoDesk ayaa bilaabay AutoCAD WS, qalab kaas oo aad ku samayn karto tan iyo wax badan oo badan oo leh faylasha AutoCAD on internetka.
Post Previous«Previous Ugu Wanaagsan Shirka Manifold
Post Next Xakamaynta fog ee AutoCADNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Sida loo daabaco faylasha AutoCAD on internetka"